Inkxaso yeTekhnoloji | I-Shijiazhuang Neming yokungenisa ngaphakathi kunye nokuThumela ngaphandle kweli, i-Ltd.
Iibhatyi zethu zesoftshell zenziwe ngomgangatho womgangatho 3in1 ilaphu.
Ilaphu elingaphandle lolugqityiweyo i-DWR, phakathi kunye ne-TPU membrane, ibhonsi yangaphakathi enoboya obuncinci, Ilaphu alinamanzi, alinamoya kwaye liyaphefumla, likugcina lomile kwaye likhululekile kuzo zonke iindawo zakho zangaphandle. Ukusebenza okungangenwa ngamanzi kugcina amanzi ngaphandle ngelixa inkqubo yokuphefumla ye-hydrophilic ivumela ukufuma kwangaphakathi ukuba kuphume. Ilaphu langaphandle le-DWR liqinisa umgangatho ongangeni manzi kwaye linceda amanzi ukuba abaleke ngelixa usongeza kwimpahla yokusebenza komoya.
Kukulungele ukuhamba, ukukhempisha, ukudibanisa okanye naphina apho ikwenza khona imisebenzi yakho yangaphandle.
Yintoni ihempe yokubaleka?
Ihempe ebalekayo ihlala yenziwe ngamalaphu okusebenza kwaye yenzelwe ukonwaba okuphezulu ngelixa ibaleka. Zininzi iintlobo ezahlukeneyo zenziwe ukulungiselela iimeko zemozulu ezahlukeneyo, iintlobo zokubaleka, kunye nezinto ozikhethayo.
Ezinye iimbaleki zinxiba isikipa esiqhelekileyo, somqhaphu sokubaleka, ngakumbi ukuba ziimbaleki ngamanye amaxesha okanye ziqala nje umdlalo. Ihempe ebalekayo ineenzuzo ezininzi ngaphezulu kwesikipa, esibonisa ukubila kumsonto kude nolusu, ukomisa ngokukhawuleza, anti-UV, nevumba elibi.
Uninzi lwehempe ezibalekayo ezenzelwe iinyanga zasehlotyeni kunye namaqondo obushushu afudumeleyo abonisa ukubila kunye nokuncipha kwemisonto. Abanye banokhuselo lwe-UV olwakhelweyo. Amalaphu afaka isilivere okanye imicu yeceramic zibonelela ngokuchasene nokubila kunye nepropathi yokulwa nevumba. Amalaphu okubulala iintsholongwane ayilelwe ukunciphisa ivumba.
Eyona njongo yehempe yokubaleka ebusika kukuba bobabini bafudumele kwaye bangasindi. Izinto zokwenziwa, ezinje nge-polyester kunye ne-fiber blends, zihlala zisetyenziswa. Kukho iihempe ezibalekayo zasebusika ezibandakanya ii-hoods okanye imingxunya yesithupha kwimikhono yokugubungela izandla. Kwimeko yemozulu ebandayo ngakumbi, kungcono ukunxiba maleko, kubandakanya ubuncinci ihempe ebalekayo kunye nebhatyi engasindi eyenziwe ngeyiloni okanye enye into enganyangekiyo nomoya.
Ihempe ezibalekayo zamadoda nezabafazi ziyafumaneka kwimikhono emide, imikhono emifutshane, imikhono engenamikhono, kunye nezimbo zetanki. Ukulingana kwezi mpahla kuvela kwihempe ezikhululekileyo nezicinezelekileyo, ezilunge kakhulu. Izitayile ze-Neckline zibandakanya iintamo ezihlekisayo zobushushu obongezelelekileyo, kunye nabasebenzi kunye nezimbo ze-v-neck. Ezinye izinto ngamanye amaxesha ezifumaneka kwiihempe ezisebenzayo zibandakanya iipokotho ezifakwe izipopu kunye nemitya efihliweyo yokugcina iingcingo zeefowuni zisendaweni.
Yintoni ilaphu lokucheba ukufuma?
Ukujija, kubhekisa kubuchule belaphu lokususa ukufuma kude nomzimba kunye nelaphu ngokwalo; Ukukwazi ukuphefumla nokugcina ulusu lomsebenzisi lusomile kumbilo.
Ilaphu le-Wicking, lithetha ukuba eli laphu linee-capillaries ezincinci ezikhulu ngokwaneleyo ukuba zivumele ukufuma, njengokujuluka, kutsalwe kulusu kwaye kuphume kwaye kude. Oku kunokunceda ukugcina umzimba womile kwaye upholile naxa umntu ebila ngumsebenzi.
Ukusebenza kwethu okuphezulu, ubuchwephesha, ilaphu elinokuphefumla, ngaba uya kukugcina womile kwaye ukhululekile imini yonke. Ungazikhathazi ngokubila kwakhona.
Ilaphu le-Wicking lisetyenziswa kuzo zonke izinto zangaphandle ezenziwayo ukusuka ekubalekeni ukuya kwintaba kwaye lisetyenziswa kuwo onke amaxesha onyaka kodwa lisebenza ngokukodwa kumaqondo obushushu abandayo. Inokusebenza njenge-insulator elungileyo, malunga nobushushu, nayo. Ilungele iimpahla zemidlalo, ukunxiba uqeqesho, isiseko sendlela, ukunxiba kweembaleki njl.
Ukuhlamba ikhephu: uyinika njani i-T shirt yakho ukuba ijongile i-vintage
Ezona T-Shirts zibalaseleyo ayizizo ezitsha kraca, zezona zinxibileyo kwaye zithambile kwizinto ezininzi zokuhlamba. Banobudala kubo. Uyifumana njani ihempe oyithandayo yeediliya?
Apha ngezantsi kukho inkqubo yokuhlamba ikhephu:
1, Dipha ibhola yerabha eyomileyo kwi-potassium permanganate
2, Dry i-T shirt kunye nebhola yerabha kwiisilinda ezikhethekileyo ezijikelezayo. Ngethuba lale nkqubo i-potassium permanganate iya kuphelisa ilaphu kwindawo yokunxibelelana
3, Jonga iziphumo zokuhlamba
4, Hlamba emanzini
5, ukungathathi cala kwi-oxalic acid
6, Hlamba emanzini
7, Faka isicelo sokuthambisa
Emva koko unokufumana ihempe yakho entsha.
Nceda uqaphele, oku kuya kwenziwa ngumzi-mveliso wokuhlamba, kwaye ngexesha lokuthunga, kuya kufuneka usebenzise iinaliti ezifanelekileyo zebhola kwaye utshintshe inaliti ngexesha. Ngaphandle koko, kukho umngcipheko wokonakalisa ihempe yakho kwindawo yokuhlamba.